Gacanyare ka shaqeeya Laanta Socdaalka oo hooyadiis u habeeyay sharciga deganaanshaha | Somaliska
Mid ka mid ah shaqaalaha Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ee Malmö ayaa lagu hayaa baaritaan boolis ka dib markii ay cadaatay in uu hooyadiis u habeeyay sharciga deganaanshaha (Uppehållstillstånd).
Haweeneyda oo sharciga la siiyay sanadkii 2008 ayaa sharcigu ugu soo dhacay 3 isbuuc gudahood ka dib markii ay xareysay dalabkeeda. Haweeneyda oo aan waxba qorin waxna akhrin ayaa markii ay sharciga dalbatay waxaa wiilkeeda oo ka shaqeeya Laanta Socdaalka uu email u qoray sheefkiisa oo uu ka codsaday in hooyadiis uu sharciga siiyo.
Sadex isbuuc ka dib ayaa sheefka laftiisa uu gaaray go’aanka lagu siinayo sharciga haweeneyda isaga oo aan cid kale la tashan, sida caadiga ah go’aamada waxaa wada gaara 2 gacanyare. Booliska ayaa hada baaritaan ku haya wiilka oo la aaminsanyahay in uu laaluush bixiyay. Ninka sheefka ah oo isaga tagay shaqada Laanta Socdaalka ayaa isaga la ganaaxay lacag. Wiilka shaqaalaha ah ayaa wali ka shaqeeya laanta Socdaalka.
Iyadoo go’aanka haweeneyda lagu siiyay sharciga uu ahaa mid si qaldan loo gaaray, ayaa hadana waxaa cadaatay in hooyada aysan xaq u lahayn in sharciga Sweden la siiyo. Haweeneyda sharciga la siiyay sanadkii 2008 ayaa geeriyootay balse haddii ay noolaan lahayd ayaa sharciga laga ceshan lahaa, maadaama Laanta socdaalka ay hada dalbatay in sharciga laga soo celiyo haweeneyda.
Waa cajiib walaahi, Asxaabta 2 sano sharciga loogu diiday awgeed maxaa cusub beryahaan sxb yaala . Arimahaas wuu ka amuusay jimcaale mudooyinkaan. sxb hooshaas soo baar iyo arimaha leesla dhexmaraaya beryahaan ee qanuun cusub in uu soo bixi doona.
Laaluush ayaa meesha ka socda waa wax lala yaabo in sweden eey ka dhacdo. lakin wax badan oo aadan rumeeysan karin ayaa ka dhaca wadankaa. Dacwada arimaha ku saabsan wax war cusub ma lahaa filaa , maxkamada goteborg ayuu jiraa kiiskeega aniga waxaana ku jiraa reer 2 sano.
asc dhamaan asaxaabta somaliska walal ABDI waa maxay wax leesla dhaxmaraayo iyo qanuunka cusub soo baxaayo aad shegeyso walal noo faa faahi adigoo mahadsan thnks bro
jiimcale ado rali ha ariti jublan iiga so jabab ado rali bar
yaa allah waxaas weyba dhimatey waxa nool mey u daneeyaan qof dhintey waaba dhintey ilaahey baa oofsadaye ilmihii baa naga qaan gaadhey oo iyagu sabab u ahaayeen taas wax hanooga qabtaan hadey wax qabanayaan umadaan
war cusub oo soobaxay waxa manta lanta socdalka laga so xigtay in ay ko an ka garayaan si dag dag ah qaxotiga somalida loogu celin laha dalkooda ayada o ay arinkaas maalmahanba ay fadhiya badan ka yelanayeen hadana waxa la leyahay war sax ah waxu so baxaya 10 bisha july- 20 13 mahad sanidin sxb
rashka walalkis war maka heysaa dadkan aan wax isku dhalim imeey ku jiraaan waxansoo baxaya thnks walal